Live Wallpaper for Samsung ⭐ Spring HD Wallpapers အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.5 | 50,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（19.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Live Wallpaper for Samsung ⭐ Spring HD Wallpapers
Samsung အတွက် Live Wallpaper ⭐ Spring HD Wallpapers သည် HD နောက်ခံ၊ နာရီ၊ မှော်ထိတွေ့မှု၊ ရုပ်ပြောင်များ၊ 3D နောက်ခံပုံများ၊ ကာတွန်းရောင်စုံအမှုန်များနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သောအခမဲ့နံရံကပ်အလှဆင်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။
⭐ အခမဲ့ Live Wallpaper များ ⭐
Samsung အတွက် Live Wallpaper ⭐ Spring HD Wallpapers အစိမ်းရောင်အရွက်များနှင့်ပန်းရောင်အလင်းရောင်ပုံများ၊ ခရမ်းရောင်စိမ့်ကျသည့်နောက်ခံများ၊ နွေနှင့်နွေရာသီပန်းပွင့်များ HD wallpaper၊ နောက်ခံပြောင်းလဲမှု၊ ဘောင်များ၊ ကာတွန်းရောင်စုံအမှုန်များ၊ မှော်ထိတွေ့မှု၊ အန်နာလော့နာရီ၊ အီမိုဂျီ၊ သင်၏အမည်နှင့်အခြားအရာများကိုသော့ခတ်မြင်ကွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောအရာများအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် FREE !
b အခမဲ့ Android Wallpapers ❤️
HD live wallpapers များသည် Samsung Galaxy ဖုန်းများကဲ့သို့ Android ဖုန်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ p5w နောက်ခံ၊ Xiaomi တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ၊ Oppo ဖုန်းများအတွက်နောက်ခံပုံများနှင့်အခြားအရာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Samsung အတွက် Live Wallpaper နှင့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီပန်းပွင့်များနှင့်ပန်းရောင်အလင်းရောင် HD နောက်ခံများသည်တက်ဘလက်များတွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
⭐ စိတ်ကြိုက် ⭐
နာရီ၊ ဘောင်များ၊ ရုပ်ပြောင်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် themes များဖန်တီးပါ။ ကာတွန်းရောင်စုံအမှုန်များ၊ နောက်ခံပြောင်းလဲမှုကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထိတွေ့မှု၊ သို့မဟုတ် 3D wallpaper သို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံများပြုလုပ်ပါ (parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ parallax နောက်ခံပုံများ) ။ ၎င်းသည်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
❤️ ၎င်းကို Parallax အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါ။ Samsung
Samsung အတွက် Live Wallpaper ⭐ Spring HD နောက်ခံပုံများ အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်သည် နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီပန်းပွင့် 3D နောက်ခံပုံများသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံများ။ Parallax နောက်ခံပုံများမှာ 3D နက်ရှိုင်းမှုရှိပြီးသင့်မျက်နှာပြင်နှင့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီပန်းပွင့်များ HD နောက်ခံများသည်အေးမြသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နောက်ခံသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများကိုထည့်နိုင်သည်။ မှော်အထိနှင့်အလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲမှုကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
a အခမဲ့နောက်ခံရွေးပါသို့မဟုတ်သင်၏ selfie ထည့်သွင်းခြင်း💖သတ်မှတ်မည် အလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်း Samsung Samsung အတွက် Live Wallpaper ထဲသို့ဓာတ်ပုံဘောင်များကိုထည့်ပါ💖သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကာတွန်းရောင်စုံအမှုန်များကိုပြောင်းပါ။ magic မှော်ထိတွေ့မှု (အရောင်အမှုန်နှင့်အသံ) ထည့်ပါ။ 💖ရွေ့လျားသောရုပ်ပြောင်များကိုထည့်ပါ သင်၏ကီးဘုတ်မှ နေ၍ live Live wallpaper ကို 3D နောက်ခံသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံ (parallax နောက်ခံပုံ) ပြုလုပ်ပါ။ your သင်၏အမည်သို့မဟုတ်ထုံးစံစာသားကိုထည့်ပါ။
Samsung အတွက်တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများအက်ပလီကေးရှင်းတွင်အကောင်းဆုံးနောက်ခံအချို့ပါရှိသည်။ သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်နောက်ခံအကြောင်းအရာအသစ်များမကြာခဏပါ ၀ င်ပါ။
အခမဲ့ဖုန်းနောက်ခံဖြင့်အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများကို ရယူ၍ ဤ live wallpaper နောက်ခံကိုအခမဲ့ခံစားပါ။
HD wallpaper အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သက်ရှိနောက်ခံအခမဲ့ရှိပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းနံရံကပ်အက်ပလီကေးရှင်းများ! နောက်ခံ HD ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ - နာရီထည့်ပါ🕙၊ သင်၏အမည်🆕၊ ရုပ်ပြောင် ation၊ မှော်ထိတွေ့မှု👉၊ အမှုန်များထည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံပုံ HD အခင်းအကျင်းကိုဖန်တီးပါ။
ဘာအသစ်လဲ Live Wallpaper for Samsung ⭐ Spring HD Wallpapers 6.7.13